U oggolow Vangölü Wharf Beach iyo Wharf Ferry Park Go Dadweynaha Mar labaad | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari65 VanU ogolow Vangölü Wharf Beach iyo Wharf Ferry Park Go Public Again
20 / 01 / 2020 65 Van, tareenka, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, Headline, TURKEY
vangolu pier xeebta iyo garoonka dayuuradaha deerada oo u furan dadweynaha mar labaad
Iskele Park iyo Kordonu, oo si lama filaan ah loogu gubay oo dadweynuhu u xidhnaayeen bishii Maarso ee sannadkii hore, ayaa burburay muddo ka badan hal sano. Wicitaan ayaa ka yimid Vangölü Aktivisitler beertaas, oo la sheegay in lagu abaabulayo mashruuc cusub si dhakhso leh markii uu dumay laakiin loo daayay mustaqbalkeedii. Dadka u ololeeya ayaa sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah dib-u-habeyn loogu sameeyo oo loo helo dadweynaha.
Xeebta Ferry Pier iyo Pier Park, laga bilaabo taariikhda of March 21, 2019 Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD), bilaabay isgoyska dadka lugeynaya ee la xiray si ay shuqulka leh salaysan ballaarinta aagga saldhiga. Warbaahinta bulshada ayaa jawaab ka bixisay shacabka, taas oo astaan ​​u ah magaalada, in muddo ah oo aan loo furin shacabka isla markaana burburay.
Beach Pier, calaamad muhiim ah oo magaalada iyo Ferry Pier Park, March 21, 2019 Date of the Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), ballaarinta sababo la xiray aagga dadka lugta ah ay saldhiga ku leh shaqada la bilaabo. Xadiiqadii kadib, geedo, cagaar iyo dhamaan qaab dhismeyaashii kale ayaa la burburiyey lagana burburiyey aagga jira, magaaladu waxay keentay ficil dadweyne. Saraakiisha TCDD waxay samaynayaan bayaan kadib falcelinta ka dib; Wuxuu sheegay in aagga lugta lugaynta ay dib u furi doonaan dadweynaha mar labaad isla markaana meel kale oo nasasho ah la samayn doono wax yar kadib hawlgallada balaadhinta logistic-ga. Ku sii wadista sawirkii burburay ee ka jiray aagga hadda jira gudaheeda oo aan qaadin wax talaabooyin ah ayaa mar kale falcelin ku sameeyay warbaahinta bulshada. In kasta oo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha 'Van Lake' ay codsadeen in İskele Saaxil Park loo furo fagaarayaasha ololaha ay ka bilaabeen warbaahinta bulshada, waxay bilaabeen olole cinwaankiisu ahaa "Claim Van". Dadka u dhaqdhaqaaqa Van Lake, oo bayaan u soo saaray Wargayska 'Şehrivan' ee mawduuca ka hadlaya, ayaa yidhi, "Ma jiraan wax carqalad ah oo ka dhigaya in aagga hadda jira ka qurux roonaado iyada oo la taageerayo muwaadiniinta magaalada deggan. Hawsha ugu weyn ee helitaanka aaggan magaaladu waxay ku taal degmada Van Metropolitan District. Daraasad ay sameeyeen degmaddeenna oo la leh TCDD ayaa meesha ka saari doonta dhibaatadan. ”
“MAGAALADU WAA KA SAMEEYAAN MUHIIM MUHIIM AH”
Maaddada la xidhiidha Wargeyska ShahivanDadka u dhaqdhaqaaqa Van Lake, İskele Beach iyo İskele Ferry Park, oo bayaan ka soo saaray, ayaa sheegay inay muhiimad weyn u leedahay magaalada. Dhaqdhaqaaqayaasha waxay cadeeyeen in beerta ay maraakiibta xireen dadkuna ay u isticmaali jireen aag maqal oo ku xiga xarkaha inay calaamada u yihiin magaalada, iyagoo intaa raaciyay: “The Beach Beach iyo Pier Ferry Park ee degmada İskele ee degmada Tusba waxay kaalin weyn ka qaateen horumarka xaafadaha. Baarkinka 'pier park', oo ah mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan magaalada, wuxuu ahaa meel ay ku dhowaad muwaadin kasta soo booqdo, warwareego, martidiisa qaato, neefsado, fadhiyo geedo geed hoostiisa ah iyo geesaha. Meesha uu ku daawaday taarikhda Van Castle taariikhi ah, ee ka haray Urartians-ka kumanaan kun oo sano oo taariikhi ah, Mount Erek oo ay ka wada qeyb qaateen, magaaladii hore ee Van, iyo shaaha samovar ee harada Lake Van ayaa astaan ​​muhiim u ah magaalada. ”
"Baarkinka Scaffolding wuxuu ahaa mid aamusnaan la'aan ah"
Isagoo caddeeyay in Iskele Beach Park oo ku fidsan Van Lake uu ku yaal magaalooyin aad u yar, ayaa Dhaq dhaqaaqayaashu waxay yiraahdeen, “Magaaladee ayaad ka daawan kartaa magaaladaada dhanka badda, maahan kaliya muwaaddiniinta magaaladan laakiin waxay sidoo kale tahay barta magaaladeena. Sida Jasiiradda Akdamar, waxay ahayd xarun dalxiis oo muhiim ah oo soo jiidata dalxiisayaasha. Nasiib darrose, baarkinkan u gaarka ah ayaa dhawaan la baabi'iyay. Iskele Beach Park wuu aamusnaa wuxuuna sababay falcelin aad uxun oo ka timid shacabka kadib markii uu dumay xalay fiidkii iyadoo aan cidina ogeyn. Waxaan isku daynay inaan wax ka baranno mowduuca annagoo booqannay saaxiibo xasaasi ah oo iskaa wax u qabso ah isla markii burburka la gaadhay. ”
“HALKAN ayaa loo fasaxay in la furo 3da bilood”
In kasta oo dhaqdhaqaaqayaashu sheegeen in ay ka heleen macluumaad ka yimid mas'uuliyiinta ka dib dumintii iyo in dadweynaha dib loo furi doono mar kale waqti gaaban, wuxuu adeegsaday tibaaxyada soo socda isaga oo tixraacaya hannaanka aroosadda inta lagu gudajiray: Waxay noo soo gudbiyeen in TCDD ay ka tirsan tahay meesha go'aankii duminta laga qaatay iyo in howlo ballaarin ah laga fuliyey aagga horey loogu qorsheeyay labada birood ee dhowaan la dhisay. Marka laga hadlayo geedi-socodka duminta ka dib, TCDD iyo dowladda hoose ee degmada 'Mun Metropolitan' waxay cadeeyeen in aagga mar kale laga furi karo fagaareyaasha muddo 3 bilood gudahood ah. Dhaqdhaqaaqayaal ahaan, waxaan sheegnay inaan raaci doonno maadada oo aan ka shaqeyn doono mawduuca. ”
“FAHAMADAyadu way sii socon doontaa ilaa inta laga gaadhayo natiijada kama dambaysta ah”
Isagoo cadeeyay inay sii wadayaan la kulanka siyaasiyiinta iyo maamulayaasha si İskele Beach Park loogu helo shacabka mar kale, Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa yiri, “Siyaasiyiinteena iyo maamulayaasheena waxay cadeeyeen inay taageeri doonaan arintaan isla marki la dumiyay" Wadada 'The Beach Beach Park' shaqadeenana wuu socon doonaa ilaa natiijada ugu dambeysa la helo. Iyada oo la kaashanayo muwaaddiniinta magaalada, ma jiraan wax carqalad ah oo ka dhigaya aagga hadda jira mid qurux badan. Hawsha ugu weyn ee helitaanka aaggan magaaladu waxay ku taal degmada Van Metropolitan District. Daraasad ay sameeyeen degmaddeenna oo la leh TCDD ayaa meesha ka saari doonta dhibaatadan. ”
XIDIGAHA GAROONKA EE SOCIAL MEDIA
In kasta oo dadka u dhaqdhaqaaqa Van Lake ay soo jiiteen wax qabadkooda la xiriira dhibaatooyinka kaladuwan ee magaalada, Maarso 21, 2019, TCDD waxay biloowday olole furitaanka Pier Beach iyo Pier Ferry Park, kaas oo qeyb ahaan qodey laakiin aan weli la soo gabagabeynin dhismaha duuliyaha maraakiibta. .
U DIRIDDA Awood-qeybsiga
Dadka u ololeeya arrimaha 'Van Lake' waxay codsadeen in İskele Saaxil Park loo furo fagaarayaasha magaca ay ku bilaabeen warbaahinta bulshada. Erayada soo socda ayaa lagu soo dhejiyay boodhadhka cinwaankiisu yahay “Iska ilaali Van”: “Annaga oo kaashanayna Van Metropolitan Municipal iyo TCDD, waxaan codsaneynaa İskele Beach Park, oo ah meelaha ugu quruxda badan Van, halkaas oo dadku ku nastaan ​​oo ay kujiraan dalxiisayaasha, in loo furo dib u isticmaalka dadweynaha. Waxaan dalbaneynaa in dib loo habeeyo Erek Mountain, Van Castle, iyo Van oo ah qaab aan la mid aheyn dowladii hore ee Iskele Beach Park, halkaas oo sifiican looga daawado harada Lake Van, halka Van kasta uu ku neefsado, ku neefsado, oo uu tuso martidiisa.
Burburkii 'keleskele Ferry Park ee degmada İskele ee degmada Tusba, ka dib markii la dumiyay shacabka magaalada, waxaa laga soo saaray hadalo ku saabsan duminta beerta, muwaadiniintuna waxay ka muujiyeen falcelintooda warbaahinta bulshada waxayna xustay in beerta dib loo cagaarayo. Waa kuwan waaya aragnimada iyo bayaanada laga soo saaray hanaankaas…
SPEHRİVAN NEWSPAPER KU SAMEEYSA XIDHIIDHKA GUUD
'Pier Ferry Park' laga bilaabo bishii March 2019 ee Republic of Turkey State Tareennada (TCDD) by saldhigga burburinta deegaanka ah xiritaanka of isgoyska dadka lugeynaya shaqada bilaabay, si loo balaadhiyo iyo meelaha cagaaran ayaa sababay jawaabta ee dadweynaha magaalooyinka. Dad badan ayaa dhalleeceeyay xaaladda gaar ahaan warbaahinta bulshada, gaar ahaan maadaama aaggu u xirnaayey isgoysyada lugta ah mana jiro macluumaad hordhac ah oo laga bixiyay mowduuca. Bayaanno badan ayaa laga sameeyay aagga su'aal laga taagay markii wargeyska 'hehrivan' uu ka soo saaray arrinta ajandaha oo uu muujiyay himilooyinka dadweynaha. Kadib shaqadii lagu qabtay İskele, Injineerada TCDD iyo mas'uuliyiinta kale waxay cadeeyeen in aaga lugta lugaynta dib loo furi doono shacabka isla markaana meela kale oo nasasho ah la abuuri doono waqti gaaban kadib shaqada balaadhinta aaga.
# VANİSKELEYESAHİÇÇI HASHTAGI REASON EE REAON
Ka dib markii la dumiyay Iskele Ferry Park oo ku yaal Degmada Iskele isla markaana meeshii tareenka la beddelay bedelkeeda, waxay taasi falcelin ka dhalisay dhammaan barta bulshada ee ay ku qoran tahay magaca 'VanIskeleyeSahipÇık' ee warbaahinta bulshada. Jawaabta ka dib, bayaanno badan ayaa laga sameeyay mowduuca. (Hamit Karakuş / Erdal Erbaş - Wargeyska Shahivan)
Pier Beach iyo Pier Ferry Park
Vangölü Pier Beach iyo Pier Ferry Park